Kuveyt Menkul | Shuruudaha iyo Xaaladaha
SHURUUDAHA Qandaraaska GANACSIGA
* Koontada aad ka furaneyso shirkadda dallaalnimada ee idman iyo dhammaan macaamillada laga sameynayo koontadan waxaa lagu duubi doonaa barxadda Meta Trader 5.
* Hantida leverated iyo macaamillada ganacsi ee ka dhalanaysa waa khatar. Sababtoo ah saameynta leverage, waa in had iyo jeer la tixgeliyaa in ganacsiga oo leh qiimo yar uu ka shaqeyn karo suuqa ama adiga, iyo dareenkan, saameynta leverage ayaa laga yaabaa inay keento guulo sare iyo sidoo kale khasaaro badan. Dhaqdhaqaaqyada qiimaha xun awgood, waxaad waayi kartaa dhammaan lacagtii aad ku maalgashatay shirkadda dallaalka. Sidaa darteed, u qoondee kaliya qaybta keydkaaga ee aad awoodi karto inaad ku weydo macaamilkan. Ha isku halleynin ballanqaadyada wax soo saarka sare.
* Ka ganacsiga hantida hantida leh iyo macaamil ganacsiyeedka macaashka sida qandaraasyada mustaqbalka, ikhtiyaarrada suuqyada saamiyada, CFDs, ikhtiyaariyada lacagta lagu iibsado ee miiska laga soo iibsado iyo kuwa la soo gudbinayo waxay leeyihiin khatar aad u sareysa. Marka loo barbardhigo qiimaha qandaraaska macaamil macaamil ganacsi, farqiga hore wuxuu noqon karaa mid yar; markaa macaamilku waa 'leveired'. Sidaa darteed, dhaqdhaqaaq yar oo suuq ah ayaa saamayn weyn saamayn weyn ku yeelan doona lacagaha aad dhigatay, ama ay tahay inaad dhigato. Xaaladdaani waxay ku shaqeyn kartaa adiga oo adiga ama adiga kaa soo horjeeda. Dhaqdhaqaaqa sicirka awgood, waxaad gebi ahaanba waayi kartaa xaddiga dammaanadda hore iyo dammaanadaha aad ku leedahay koontadaada ama in ka badan si aad u ilaaliso booskaaga. Waxaa laga yaabaa inay horumar ku samaynayso iyadoo loo eegayo shuruudaha. Sidaa darteed, waxaa laga yaabaa inuu jiro khilaaf danaha u dhexeeya shaqaalaha Shirkadda Maalgelinta iyo macaamilka. Macmiilku waa inuu had iyo jeer tixgeliyaa khilaafkan xiisaha leh ee wada xiriirka uu la leeyahay shaqaalaha Shirkadda Maalgashiga.
* Shirkadda Maalgashiga ayaa ah dhiggagta macaamilka macaamilidda hantida iyo alaabooyinka ka dhasha ee la kala iibsado. Xawaaladahaas, Shirkadda Maalgashiga waxay ku jirtaa booska iibiyaha ka soo horjeedka iibsadaha, iibsadaha ka soo horjeedka iibiyuhu, xaaladda ay macaamiishu ku weyneyso lacagta sababo la xiriira nooca adeegga la bixiyay waxay keeneysaa in Shirkadda Maalgashiga ay macaash sameyso. Waa inaad haysataa geesta hore si aad uhesho caymis boos kasta oo aad rabto. Dammaanadda hore iyo dammaanadda dayactirka waxaa lagu dabaqi doonaa sicirka lagu qeexay heshiiska guud ee lala galay Hay'adda Dhexdhexaadinta, haddii aad hoos timaad damaanad qaadka dayactirka, Dukaanka Hantidhawrka ayaa loo oggol yahay inuu xiro jagooyinka koontada. Waa in la tixgeliyaa in falanqaynta farsamo iyo tan aasaasiga ah ee ay sameynayaan shaqaalaha guryaha dilaalku ee ku saabsan ka ganacsiga hantida iyo waxyaabaha soo noqnoqda ay ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof.Waxaa lagu xisaabtamayaa in saadaasha lagu sameeyay falanqeyntan aan la xaqiijin karin. > * Amarka aad bixisay ee ku saabsan hantida iyo hantida macaashka la iska qaado, waa la kansali karaa ama amarka waa la fulin doonaa haddii booska ay qaadatay Hay'adda Dhexdhexaadinta ujeedadeedu tahay ilaalinta hay'ad kale ay kansal ka noqdaan dhiggooda ama ay isbadalaan qiimaha. Maraakiibta waa la beddeli karaa. Waa in la ogaadaa in macaamil ganacsi uusan ku dhici karin waqtigii loogu talagalay. Way ku haboonaan laheyd in la hubiyo sicirka hay'adaha kale.
* Kahor intaadan bilaabin macaamil ganacsi, waa inaad ka heshaa xaqiijin hay'adaada idman dhammaan guddiyada iyo khidmadaha kale ee macaamil ganacsi ee lagugu leeyahay. Haddii khidmadaha aan lagu qeexin qaab lacageed, waa inaad codsataa sharaxaad qoraal ah oo leh tusaalooyin cad oo ku saabsan sida ay adiga kuu saamaynayso. Waxaa lagu xaqiijin karaa qiimo ka dhan ah INVESTOR halkii qiimaha laga heli lahaa. Noocyada amarrada ayaa sidoo kale mas'uul ka ah marka ay jiraan warar muhiim ah iyo socodka xogta furitaanka suuqa.